China Cutting mat ho an'ny Cricut, 9924, 12 ″ x24 ″ Fanapahana fanapahana ho an'ny famokarana sy famokarana Cricut Joy Maker | Allwin
Kitapo fanapahana ho an'ny Cricut, 9924, 12 ″ x24 ″ Fanapahana fanapahana ho an'ny Cricut Joy Maker
Kitapo fanapahana ho an'ny Cricut, 9924, 12 ″ x24 ″ Fanapahana fanapahana ho an'ny Cricut Maker
• Miasa lavorary ho an'ny Cricut Discover Air 2 milina famokarana elektronika DIY farany.
• Mat ho an'ny fametahana adhesive grama dia namboarina ho an'ny maivana maivana, fitaovana natolotra ho an'ny karda matevina, kardaly manjelanjelatra, akora andriamby, tabilao vita amin'ny lamba, lamba misy henjana.
• Ny matotra fanapahana fanoloana dia vita amin'ny PVC kalitao Premium, famahety fanapahana vy amin'ny 12 * 24 (santimetatra)
• Tazomy ilay rakotra sarimihetsika mazava ao amin'ireo tsihy fanapahana siloette Siloette rehefa mitahiry mba tsy ho potika sy vovoka hatrany ny fametahana fametahana tsihy. Ampiasao ny scraper hanesorana ireo sombin-javatra be loatra sy ny spatula hanesorana tsara ireo sary voapaika.
• Ireo Mats ireo dia manana ny haavon'ny fihazonana azy tsara hitazomana mafy ny fitaovanao mandritra ny fotoana fohy ary ahafahana manala mora foana ny fitaovana. Ny fandriana fanapahana dia tsara ho an'ny mpanao asa tanana, ny quilter, ny mpianatra kanto ary ny fialamboly hanao ny ankamaroan'ny Tetikasa DIY.
Item Model Model 9924
Product Dimensions (habe feno) 330x660 mm
Mety amin'ny milina Ho an'ny Cricut explore Air 2
Previous: Kitapo fanapahana ho an'ny Cricut, 9912, 12 ″ x12 ″ Fanapahana fanapahana ho an'ny Cricut Maker
Manaraka: 5 sosona A0 fanapahana tsihy, 661A0, fanasitranana tena tsihy fanapahana
Kitapo fanapahana Silhouette, 8824, 12 ″ x24 & ...
3 sosona A2 manapaka Mat, 883A2, Manasitrana tena Cu ...